Grand Theft Auto 4 tonga amin'ny fifanarahana aoriana ho an'ny Xbox One | Vaovao momba ny gadget
Araka ny efa nolazainay taminao tamina fotoana maromaro, Microsoft dia miasa mba hanao lalao nomerika maro an'isa Xbox 360 hifanaraka tanteraka amin'ny Xbox One. Noho izany, nitarina ihany koa ny lisitra nandritra ity volana febroary 2017 ity, izay efa nahatratra zava-dehibe tokoa isan'izy ireo. VTompokolahy any, mijanòna ary tadiavo hoe inona ireo lalao vaovao azo alaina ao amin'ny Xbox One na dia avy amin'ny zokiolona iray aza. Ny zava-dehibe indrindra izay ho hitantsika ato amin'ity lisitra ity dia ny lalao kôlta, Grand Theft Auto IV, fa tsy tongatonga ho azy izany.
1 Lalao ho tonga amin'ny Xbox One amin'ny Febroary 2017
2 Lalao maimaim-poana amin'ny volana Febroary
Lalao ho tonga amin'ny Xbox One amin'ny Febroary 2017
Sarin'ny GTA - San Andreas ho an'ny PS2
Ny tena manamarika an'ireo vaovao tafiditra ao anaty fampifanarahana aoriana dia Grand Theft Auto IV, miaraka amin'ny saga vitsivitsy Call of duty, ny andiany feno an'ny BioShock, kinova telo koa an'ny malaza loza, miaraka aminy Dragon Age Origins, Fallout 3, Fallout New Vegas y Fiadiana amin'ny ady.
Hahita kilasika mahaliana ihany koa isika toy ny Taxibe adala y Fusion Frenzy, lalao ahafahantsika mifalifaly. Na dia tsy ny fampifanarahana mihemotra izay tadiavintsika rehetra aza, indrindra ireo vao niditra tamin'ny fomba nomerika hividianana lalao amin'ity taranaka farany ity.
Lalao maimaim-poana amin'ny volana Febroary
Fantatrao tsara fa manolotra ny fomba fandoavam-bola an-tserasera i Microsoft, izay miaraka amina kilalao horonantsary maimaim-poana isam-bolana hanofa ny fisoratana anarana. Ireto ny lalao miaraka amin'ny Xbox Live Gold mandritra ny volana febroary, mba hahafahanao manana fotoana mahafinaritra nefa tsy mandany euro fanampiny.
Vazivazy kely ho an'ny Xbox One, ny mpampiasa dia hahazo zavatra kely noho ny lalao video simulation racing Project Cars, iray amin'ireo ankafizin'ny mpifaninana ary iza no miatrika Forza Motorsports. Avy amin'ny namana tonga Mpinamana amin'ny fotoana mahatsiravina y Killer Instinct vanim-potoana 2.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Grand Theft Auto 4 tonga amin'ny fifanarahana aoriana ho an'ny Xbox One
Farany ny LG G6 dia ho tantanan'ny Snapdragon 821